व्यवसायमा डिजिटल विधिका फाइदाहरू
अहिलेको युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो। यी प्रविधिहरू विद्युत् (डिजिटल) को माध्यमबाट सञ्चालन हुने भएकोले अहिलेको समयलाई डिजिटलको जमाना भनिन्छ। हरेक क्षेत्रमा अहिले डिजिटल विधि कै प्रयोग भइरहेको छ। यो प्रविधिको प्रयोगविना जीवन सञ्चालन गर्न धेरै गाह्रो छ।
अहिले पुरा पढ्नुहोस् “व्यवसायमा डिजिटल विधिका फाइदाहरू”
पेटेण्ट के हो ? कहाँ दर्ता गर्ने ? र चोरी गरे के सजाय हुन्छ ?
व्यापार व्यावसाय गर्दा आफूले आविष्कार गरेको नयाँ तरिका, सामान(वस्तु), व्यावसायको नाम, लोगो आदी अरू कसैले चोरी वा नक्कल गरेमा तपाईँले धेरै घाटा बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ। जस्तै: सप्तरी जिल्लाको बर्मजिया भन्ने ठाउँमा “बाजेको पेडा पसल” नामका हेर्दा उस्तै देखिने करिब ५० पुरा पढ्नुहोस् “पेटेण्ट के हो ? कहाँ दर्ता गर्ने ? र चोरी गरे के सजाय हुन्छ ?”
व्यवसाय सञ्चालन गर्दा कहिलेकाहीँ विभिन्न परिस्थिति आउन गई यसलाई निरन्तरता दिन नसक्ने र व्यवसायको नियमित सञ्चालन व्यवस्थापनलाई रोक्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसैलाई व्यवसाय खारेज गर्ने भनिन्छ।
यो स्वैच्छिक खारेजी हो। तोकिएको नीति नियम पालना नगरेमा सम्बन्धित निकायबाट पनि व्यवसाय खारेज गरिदिने पुरा पढ्नुहोस् “व्यवसाय दर्ता खारेज”